ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ လူမင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦးအတွက် အားပေးစကားပြောလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Posts
လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာ့ပြည်တွင်း အရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင် စတဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှင်တွေလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ လင်းလင်း၊ ဒါရိုက်တာဏကြီး၊ လူမင်း၊ ပြေတီဦး၊ ကိုပေါက်၊ အနဂ္ဂ၊ မောင်မောင်အေး စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖွင့်ခံ ထားရတာဖြစ်ပြီး ဖမ်းဝရမ်းပါအထုတ်ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့မှာတော့ အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီး လူမင်းက ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်မှာ ဖမ်းဆီးခံ လိုက်ရပြီဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်အသီးသီးက လူမင်းအတွက် စိတ်မကောင်း ဝမ်းနည်းဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကလည်း “မိသားစုပေါင်းများစွာကျနေရတဲ့မျက်ရည်တွေ….အမရေ….အားတင်းထားပါ….လက်နက်အားကိုးနဲ့ မတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေဝဋ်လည်ကြပါစေ !!!” ဆိုပြီး လူမင်းရဲ့ ဇနီး မခင်စံပယ်ဦးအတွက် အားပေးစကားပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖွင့်ခံ ထားရတဲ့ ခင်ပွန်းရဲ့ အမျိုးသမီးပီပီ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ လူမင်းရဲ့ အမျိုးသမီး မခင်စံပယ်ဦး အတွက် အားပေးစကားပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။
ဖမျးဆီးခံလိုကျရတဲ့ လူမငျးရဲ့ဇနီးဖွဈသူ ခငျစံပယျဦးအတှကျ အားပေးစကားပွောလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
လကျရှိဖွဈပကျြနတေဲ့ မွနျမာ့ပွညျတှငျး အရေးနဲ့ ပကျသတျပွီး ရုပျရှငျ၊ ဂီတ၊ သဘငျ စတဲ့ နယျပယျ အသီးသီးက အနုပညာရှငျတှလေညျး တကျကွှစှာ ပါဝငျလှုပျရှားနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှဖွေဈတဲ့ လငျးလငျး၊ ဒါရိုကျတာဏကွီး၊ လူမငျး၊ ပွတေီဦး၊ ကိုပေါကျ၊ အနဂ်ဂ၊ မောငျမောငျအေး စတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံ ထားရတာဖွဈပွီး ဖမျးဝရမျးပါအထုတျခံထားရတာ ဖွဈပါတယျ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၀) ရကျနမှေ့ာတော့ အကယျဒမီ မငျးသားကွီး လူမငျးက ညဘကျလူခွတေိတျခြိနျမှာ ဖမျးဆီးခံ လိုကျရပွီဖွဈပွီး အနုပညာရှငျအသီးသီးက လူမငျးအတှကျ စိတျမကောငျး ဝမျးနညျးဖွဈနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုကလညျး “မိသားစုပေါငျးမြားစှာကနြရေတဲ့မကျြရညျတှေ….အမရေ….အားတငျးထားပါ….လကျနကျအားကိုးနဲ့ မတရားအနိုငျကငျြ့တဲ့သူတှဝေဋျလညျကွပါစေ !!!” ဆိုပွီး လူမငျးရဲ့ ဇနီး မခငျစံပယျဦးအတှကျ အားပေးစကားပွောလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသု ကတော့ ပုဒျမ ၅၀၅-က နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံ ထားရတဲ့ ခငျပှနျးရဲ့ အမြိုးသမီးပီပီ ဖမျးဆီးခံလိုကျရတဲ့ လူမငျးရဲ့ အမြိုးသမီး မခငျစံပယျဦး အတှကျ အားပေးစကားပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုက်ပါတယျနျော။